Kuyini i-Nginx? - Uchwepheshe we-Semalt
I-Nginx [injini x] ingenye inqubo ye-HTTP futhi isebenzise isiphakeli se-proxy. I-Nginx isebenza njengesiphakeli se-imeyli yeposi, kanye nesiphakeli se-proxy ye-TCP / UDP ejwayelekile, lapho iqinisekisa khona abaceli bewebhu abahlukahlukene ukuba benze isivakashi sifinyelele iwebhusayithi. Igor Sysoev ekuqaleni wabhala le seva proxy. Amanye amaphakheji wokubamba angasebenzisa izindlela ezifana ne-LAMP stack (Linux + Apache + MySQL + PHP) ukuze kusebenze i-WordPress. I-Nginx ingaba isethaphu esinamandla mayelana nendlela yokuhlonipha i-proxy. Ngokudingekile, kunezindlela eziningi ama-webmasters angawasebenzisa ukuze asebenzise i-Nginx. Ungakwazi ukusebenzisa zonke izici zayo ngesikhathi esifanayo usebenzisa iseva ye-Apache. Amaningi amawebhusayithi aphethwe kwisiphakeli se-Nginx asebenza ngokusethwa kwe-Apache. Kunezinhlobonhlobo zempendulo ze-HTTPS kanye namanye ama-proxies abhekisela kuwo njengeziphakeli zewebhu.
Lesi siqondiso sikaMichael Brown, Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende, uchaza ukusetshenziswa kwesimiso se-Nginx esimisiwe. Esikhundleni sokuthembela kusezingeni le-apache yeseva, ungasebenzisa i-Nginx yedwa njenge-server eyinhloko. Kungase kube nokucabangela okukhethekile lapho kuqaliswa i-Nginx ku-WordPress. Kunolunye ulwazi olubalulekile umsebenzisi okudingeka azi mayelana ne-Nginx. Isibonelo:
Konke ukulungiselelwa kungenzeka ku-panel panel yokucushwa kwezinga leseva. Ngenxa yalokho, akukho ukuqondiswa kwezinga lokuqondisa. Ngokungafani namafayela e-Apache .htaccess noma amafayela we-IIS webconfig, i-WordPress ayikwazi ukuguqula ukumiswa kwe-Nginx..
Indlela yokuvumela imvume ihlukile kwi-Nginx kunamanye amaseva we-Apache.
I-Nginx ayikwazi ukukhipha imithetho yokubhala kabusha. I-Nginx ayinawo amandla we-.htaccess-ngakho-ke akunakwenzeka ukulungisa iseva kusuka ekugcineni komsebenzisi.
Usebenzisa ama-plugin ukufaka izimvume zakho. Kubalulekile ukufaka i- "index.php" engenza iphaneli yokuvumela ukuguqulwa kwiseva yakho.
Kubasebenzisi abangase bafune ukuthola amandla athile we-htaccess, bangakwazi ukufaka isandiso se-Htscanner PECL ye-PHP. Ngeshwa, lokhu kungukuguqulwa kokuthuthukiswa kuphela futhi kungafika nezinkinga zayo. Qinisekisa ukuthi unendlela yokulungisa iphutha ngaphambi kokusebenzisa le nqubo.
Kulesi siqondiso se-Nginx, ukucabanga ukuthi usuvele ufake i-Nginx. Ngenxa yalokho, ukufakwa kanye nemiyalelo yokuthi isebenza kanjani akubandakanyi.
Ulwazi olubalulekile mayelana ne-Nginx
Umsizi we-Nginx ubala ifayela le-map.conf ngokuzenzakalelayo uma kunikezwa iwebhusayithi entsha. Kwezinye izimo, kungadingeka ulayishe kabusha i-Nginx ngesandla ukuqinisekisa ukuthi izinguquko zithinta. Nginx futhi igcina amawebhusayithi kwifomu ye-php-fpm, noma ngabe isayithi elisha likhona.
Amawebhusayithi amakhulu angasebenzisa i-Nginx njengomuntu ongaba izizinda eziningi zokusetha.
Kukhona izixhumanisi ezingokomfanekiso, okusho ukuthi awudingi ukukhathazeka mayelana nokususwa kwengozi noma izinguquko kuyo yonke iseva.
Kubanikazi bewebhusayithi abadinga isiphakeli se-proxy ehlukile, ukusetha kwe-Nginx kungaba yindlela ebalulekile. Ukucushwa konke kwenza ukucabanga okuvamile ukuthi impande yesayithi noma ibhulogi ikhona kumsingathi. Iphuzu lokubhekisela lisezingeni leseva ngokwalo futhi hhayi emgqeni womsebenzisi. Abantu kumele bashintshe imithetho uma beshintsha izinto zewebhusayithi njengokungeza ibhulogi Source .